Usoro ojiji - LucidPix
Imelite ikpeazụ: 05 / 22 / 2020
Usoro Ojiji ndị a (“Okwu”) metụtara gị na ebe nrụọrụ weebụ a, ma ọ bụ ngwa na ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị (mkpokọta, "Ọrụ") nke Lucid VR Inc. ("Lucid" ma ọ bụ "anyị") ). Site na ị nweta weebụsaịtị Lucid ma ọ bụ site na nbudata ngwa ekwentị nke Lucid (“LucidPix”), ị kwenyere na Usoro ndị a. Ọ bụrụ na ikwenyeghi na Usoro ndị a, gụnyere mmanye mkpezi iwu na ịhapụ ịhapụ ọrụ na ngalaba 15, anaghị abanye ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Okwu ndị a ma ọ bụ Ọrụ anyị, biko kpọtụrụ anyị na info@lucidpix.com.
1. Nkọwa nke Ọrụ
LucidPix bụ ngwanrọ dabere na ngwa nke na-eji algorithms ọgụgụ isi mee ka foto gị ma ọ bụ vidiyo gị banye na 3D na data dị omimi ma ọ bụ gbanwee ndabere ma ọ bụ ihu ihu, kpuchie ihe gụnyere ederede dị iche iche ma ọ bụ akwụkwọ mmado ma tinye ụdị ahụ ma ọ bụ mmetụta site na okpokolo agba ndị ọzọ, ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo ndị ọzọ. . Usoro ihe omimi nke anwansi na-eweputa omimi ma jikota foto gi na okpokoloji nke ndi ocha nyere ya. Ngwa ahụ nyere gị (a) iwere / tọghatara n'ime foto 3D / vidiyo site na iji ngwa ahụ ma ọ bụ (b) bulite ma kesaa foto / vidiyo ndị dịlarị na ngwa ahụ. I nwekwara ike itinye ihe nzacha 3D, okpokolo agba ma ọ bụ mmetụta ọhụrụ site na iji ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị. Inwere ike itinye ederede dị iche iche ma ọ bụ akwụkwọ mmado na foto 3D na vidiyo. Ozugbo ịhọrọ usoro, nyo ma ọ bụ nsonaazụ, algorithms nke LucidPix gbanwee foto / vidiyo. Nwere ike wee kekọrịta foto / vidiyo 3D site na saịtị saịtị mgbasa ozi dị iche iche ma ọ bụ chekwaa ya maka ojiji nkeonwe na ngwaọrụ gị. Nwekwara ike igosi ma kesaa okpokolo agba, ihe nzacha ma ọ bụ mmetụta ị mepụtara site na iji ngwa Lucid ma ọ bụ weebụsaịtị, na ngwa LucidPix.
2. Nke ruru eru
Must ga-abụrịrị afọ 13 iji nweta ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị. Ọ bụrụ n’agbata afọ 18 (ma ọ bụ afọ ole iwu of nọ ebe ị bi), ị nwere ike ịnweta ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị n'okpuru nlekọta nke nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta iwu nke kwenyere na Iwu ndị a ga-agbaso. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta iwu nke onye ọrụ na-erubeghị afọ 18 (ma ọ bụ afọ nke ọtụtụ ndị nwere iwu), ikwere na ị ga-aza nke ọma maka omume ma ọ bụ nleghara nke onye ọrụ dị otú ahụ n'ihe metụtara Ọrụ anyị. Ọ bụrụ na ị na-abanye ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị na nnọchite onye ọzọ ma ọ bụ onye ọzọ, ị na-anọchi anya na enyere gị ikike ịnakwere Usoro ndị a na nnọchite onye ahụ ma ọ bụ nke onye ahụ na onye ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na ọ dịịrị anyị ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ọzọ. ma ọ bụ ihe na-emebi Usoro ndị a.
3. Akaụntụ Onye ọrụ na Nchekwa Akaụntụ
Kwesịrị iji nzere gị (wdg., Aha njirimara na paswọọdụ) sitere na saịtị ndị ọzọ na ntanetị iji nweta ụfọdụ ọrụ anyị niile. Mustkwesịrị idobe nchekwa nke akaụntụ nke atọ ma gwa anyị ozugbo ma ọ bụrụ na ị chọpụta ma ọ bụ chee na mmadụ enwetawo akaụntụ gị n'enweghị ikike gị. Ọ bụrụ na ịhapụ ndị ọzọ iji nzere akaụntụ gị, ị ga-aza ajụjụ maka ọrụ nke ndị ọrụ dị otú ahụ na-ewere ọnọdụ na akaụntụ gị.
Biko zoo aka na anyi amụma nzuzo maka ozi gbasara otu anyị si anakọta, iji ma gosipụta ozi gbasara gị.
5. Ọdịnaya onye ọrụ
Ọrụ anyị nwere ike ime ka gị na ndị ọrụ ndị ọzọ mepụta, biputere, chekwaa ma kesaa ọdịnaya, gụnyere ozi, ederede, foto, vidiyo, sọftụwia na ihe ndị ọzọ (na-agbakọta, “Ọdịnaya Onye Ọrụ”). Ọdịnaya nke onye ọrụ anaghị etinye okpokolo agba, nzacha na ederede. Ewezuga ikikere ị nyere n’okpuru, ị na-edobe ikike niile na ọdịnaya Ọdịmma Gị, dịka n'etiti gị na LucidPix. Ọzọkwa, LucidPix anaghị azọrọ na ịnwere ọdịnaya Ọdịnaya nke Onye ị biputere ma ọ bụ site na Ọrụ ahụ.
You na-enye LucidPix ebighebi, nke a na-agaghị agbanwe agbanwe, nke enweghị ya, nke enweghị ikike, zuru ụwa ọnụ, ụgwọ zuru oke, ikike inyefe ikike iji, mepụtaghachi, gbanwee, gbanwee, bipụta, wepụta, mepụta ọrụ sitere na, kesaa, zụọ ya, igosipụta ọhaneze na ngosipụta Ọdịnaya nke onye ọrụ gị na aha ọ bụla, aha njirimara ma ọ bụ ụdị nke enyere na ọdịnaya Onye Okike gị n'ụdị usoro mgbasa ozi ọwa niile amaara ugbu a ma ọ bụ emechaa, akwụghị ụgwọ maka gị. Mgbe ị biputere ma ọ bụ na - ekenye ọdịnaya Onye ọrụ na ma ọ bụ site na Ọrụ anyị, ị ghọtara na ọdịnaya Onye ọrụ gị yana ozi ọ bụla metụtara gị (dị ka aha njirimara gị, ọnọdụ gị ma ọ bụ foto profaịlụ) ga-apụta n'ihu ọha.
Na-enye nkwenye LucidPix iji ọdịnaya Onye ọrụ, n'agbanyeghị ma ọ gụnyere aha mmadụ, ọdịdị, olu ma ọ bụ aha mmadụ, ezuola iji mata onye ọ bụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, ikwere na enwere ike iji ọdịnaya Onye ọrụ maka nzube azụmahịa. Further ga-ekwenyekwu na ojiji LucidPix jiri ọdịnaya Onye ọrụ maka nzube azụmahịa agaghị emerụ gị ahụ ma ọ bụ onye ọ bụla nyere ikike ịme ihe maka ya. You kwenyere na ụfọdụ n’ime Ọrụ ahụ na-akwado site na ego mgbasa ozi ma nwee ike igosipụta mgbasa ozi na nkwalite, ma site na nke a kwenye na LucidPix nwere ike itinye mgbasa ozi na nkwalite ndị ahụ na Ọrụ ahụ ma ọ bụ, ma ọ bụ, yana njikọ yana ọdịnaya Onye ọrụ gị. Udi, udiri ya na udiri mgbasa ozi na nkwalite ndị a ga-agbanwe na-enweghị ọkwa amamịghe gị. You ghọtara na anyị agaghị enwe ike ịchọpụta ọrụ akwụ ụgwọ, ọdịnaya nke nkwado, ma ọ bụ nkwukọrịta azụmahịa dị ka nke a.
Na-anọchi anya ma nye nkwado na: (i) ịnwere ọdịnaya Ọdịmma nke Onye meziri nke gị na Ọrụ ahụ ma ọ bụ nwee ikike inye ikike na ikike enyere ahapụtara na Usoro ndị a; (ii) ị kwenyere ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ niile nke eze, ụgwọ ụgwọ, yana ụgwọ ọ bụla ndị ọzọ n'ihi ọdịnaya Oderede ka ị na-edezi ya ma ọ bụ site na Ọrụ ahụ; na (iii) ị nwere ikike iwu nwere ikike iji banye na Usoro ndị a na ikike gị.
Maynweghị ike ịmepụta, ziga, debe ma ọ bụ kesaa ọdịnaya Ọ bụla nke mebiri Usoro ndị a ma ọ bụ nke ịnweghị ikikere niile ịchọrọ iji nye anyị ikikere ahụ akọwapụtara n’elu. Agbanyeghị na anyị enweghị ikike inyocha, dezie ma ọ bụ nyochaa ọdịnaya Onye ọrụ, anyị nwere ike ihichapụ ma ọ bụ wepu ọdịnaya Onye ọrụ n'oge ọ bụla na maka ebumnuche ọ bụla.
Ewepụrụ ọdịnaya Onye ọrụ wepụrụ na Ọrụ ahụ, LucidPix na-echekwa ya, gụnyere, na-enweghị mmachi, iji rubere ụfọdụ ọrụ iwu. LucidPix abụghị ọrụ nkwado ndabere na ị kwenye na ị gaghị adabere na Ọrụ ahụ maka ebumnuche nke nkwado ọdịnaya ma ọ bụ nchekwa ọdịnaya. Lucid agaghị enwe ike ịkwụ gị ụgwọ maka ngbanwe ọ bụla, nkwusiobe ma ọ bụ nkwụsị nke Ọrụ ahụ, ma ọ bụ mwepu ọdịnaya Ọdịnaya ọ bụla.
6. Amachibidoro omume na ọdịnaya
Willgaghị emebi iwu ọ bụla, nkwekọrịta, akụrụngwa nke ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike nke atọ ndị ọzọ ma ọ bụ mee mmekpa ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ naanị maka omume gị ka ị na-abanye ma ọ bụ na-eji Ọrụ anyị. Will gaghị:
Na-etinye aka na iyi egwu ọ bụla, iyi egwu, na-eyi egwu, na-eri iwu ma ọ bụ na -eme ihe ọ bụla;
Jiri ma ọ bụ nwaa iji akaụntụ onye ọrụ ọzọ na-enweghị ikikere site n'aka onye ọrụ na LucidPix;
Jiri Ọrụ anyị n'ụzọ ọ bụla nwere ike igbochi, ịkpaghasị, na-adịghị mma ma ọ bụ gbochie ndị ọrụ ndị ọzọ ị fromụrị ọ enjoyingụ zuru ezu na Ọrụ anyị ma ọ bụ nke nwere ike imebi, gbanyụọ, ma ọ bụ mebie ọrụ nke Ọrụ anyị n'ụzọ ọ bụla;
Ndota injinia gbasara akụkụ nke Ọrụ anyị ma ọ bụ mee ihe ọ bụla nwere ike ịchọpụta koodu isi mmalite ma ọ bụ ihe ngbanye ma ọ bụ ihe mgbochi nwere ike iji gbochie ma ọ bụ gbochie ịnweta akụkụ ọ bụla nke Ọrụ anyị;
Gbalịa wezuga usoro usoro nzacha-ọdịnaya nke anyị na-arụ ọrụ ma ọ bụ nwaa ịnweta atụmatụ ọ bụla ma ọ bụ mpaghara nke Ọrụ anyị na-enyeghị gị ikike ịnweta;
Zụlite ma ọ bụ jiri ngwa ọzọ nke atọ na-emekọrịta na Ọrụ anyị na-enweghị nkwenye ederede edego anyị, gụnyere edemede ọ bụla edepụtara iji kpochapu ma ọ bụ wepụta data na Ọrụ anyị;
Jiri Ọrụ anyị maka iwu na-akwadoghị ma ọ bụ na-enweghị ikike, ma ọ bụ tinye aka, gbaa ma ọ bụ kwalite ọrụ ọ bụla nke mebiri Usoro ndị a.
Nwekwara ike idetu ma ọ bụ kesaa ọdịnaya Onye ọrụ na-enweghị nzuzo yana ị nwe ikike niile iji gosi. Inwere ike imebe, biputere, chekwaa ma obu kee ihe omuma a o bula nke:
Bụ ihe iwu na-akwadoghị, na-eme ihe ike, na-akparị mmadụ, na-akparị mmadụ, na-akpali agụụ mmekọahụ, na-elelị anya, na-eleda anya, na-eyi egwu, na-eyi egwu, na-eyi egwu, ma ọ bụ na-egwu wayo;
Ga-eme, gbaa ume ma ọ bụ nye ntuziaka maka ịda iwu mpụ, mebie ikike nke ndị ọzọ ma ọ bụ mepụta iwu ma ọ bụ mebie iwu mpaghara, steeti, mba ma ọ bụ nke mba ọ bụla;
Nwere ike mebie ikike ọ bụla, ụghalaahịa, nzuzo azụmahịa, nwebisiinka ma ọ bụ ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ;
Nwere ma ọ bụ gosipụta nkwupụta ọ bụla, nkwupụta ma ọ bụ nkwupụta na-adịghị egosipụta echiche na ahụmahụ gị n'eziokwu.
Na-egosipụtaputa, ma ọ bụ gosipụta njikọ gị na, mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla;
Nwere ozi ọ bụla a na-achọghị, mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbasa ozi ma ọ bụ arịrịọ;
Nwere ozi nkeonwe ọ bụla gbasara nke ọzọ na-enweghị nkwenye ndị ọzọ dị otú ahụ;
Nwere nje ọ bụla, data rụrụ arụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, na-akpaghasị ma ọ bụ na-emebi ihe ma ọ bụ ọdịnaya; ma obu
Bụ, na ikpe naanị anyị, bụ ihe a na-anabata ma ọ bụ na-egbochi ma ọ bụ gbochie mmadụ ọ bụla ọzọ iji ma ọ bụ nwee ọ enjoyingụ na ọrụ anyị, ma ọ bụ nke nwere ike itinye Lucid ma ọ bụ ndị ọzọ mmerụ ma ọ bụ ibu nke ụdị ọ bụla.
Na mgbakwunye, agbanyeghị na anyị enweghị ikike inyocha, dezie ma ọ bụ nyochaa ọdịnaya Onye ọrụ, anyị nwere ike ihichapụ ma ọ bụ wepu Ọdịnaya Onye ọrụ n'oge ọ bụla na maka ebumnuche ọ bụla.
7. Oke Ikikere; Nwebisiinka na ụghalaahịa
Ọrụ anyị yana ederede, eserese, eserese, eserese, vidiyo, ihe atụ, akara ụghalaahịa, aha azụmaahịa, ntinye peeji, akara bọtịnụ, akara ngosi, akara ọrụ, akara njiri mara, njikwa, ihe nzacha, ihe nzacha nke onye ọrụ mepụtara na ọdịnaya ndị ọzọ nwere ya (mkpokọta, ihe “LucidPix Ọdịnaya”) nke Lucid nwe ma ọ bụ nwee ikike ma chekwaa ya n'okpuru iwu United States na mba ofesi. Ewezuga akọwapụtara nke ọma na Usoro ndị a, Lucid na ndị nyere anyị ikikere chebere ikike niile dị na Ọrụ anyị yana ọdịnaya LucidPix. Enyere gi ikike nke a, amaghi, nke na-agaghị ebugharị, nke na-enweghị ike ịghachite, iji nweta ma nweta ọrụ na ọdịnaya nke LucidPix maka ojiji nke gị; agbanyeghị, ikike dị etu a dabere na usoro ndị a agunyeghi ikike ọ bụla: (a) ire, resell ma ọ bụ iji ọrụ anyị ma ọ bụ ọdịnaya LucidPix; (b) idetuo, mụta nwa, kesaa, igosipụta ọhaneze ma ọ bụ gosipụta ọdịnaya LucidPix, ewezuga otu anyị nyere ma ọ bụ ndị nyere ikike anyị nyere anyị hoo haa; (c) megharia ọdịnaya LucidPix, wepụ ọkwa ikike nwebisiinka ọ bụla ma ọ bụ akara, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla nke Ọrụ anyị ma ọ bụ ọdịnaya LucidPix, ewezuga akọwapụtara hoo haa na Usoro ndị a; (d) iji Ngwuputa data, robots ma ọ bụ data ekpokọtara ma ọ bụ ụzọ mmịpụta ọ bụla; ma ọ bụ (e) jiri Ọrụ anyị ma ọ bụ ọdịnaya LucidPix ndị ọzọ na-abụghị akọwapụtara ha na Usoro ndị a. Ojiji nke Ọrụ anyị ma ọ bụ ọdịnaya LucidPix na-abụghị dị ka enyere ikike iche na nke a, na-enweghị ikike edere ede tupu edee iwu, machibidoro iwu nke ukwuu, ọ ga-akwụsị ikikere enyere enyere n'okpuru Usoro ndị a. Agaghị ewepu, gbanwee ma ọ bụ zoo ikike nwebisiinka, ụghalaahịa, akara ọrụ ma ọ bụ ọkwa ikike ọzọ nke webakọtara ma ọ bụ soro ọdịnaya nke LucidPix.
Ajuju ọ bụla, nkọwa, aro, echiche, ihe mbụ ma ọ bụ ihe okike ma ọ bụ ozi ndị ọzọ ị nyefere banyere LucidPix ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ anyị (mkpokọta, “Nzaghachi”), enweghị ihe nzuzo ọ ga-abụ naanị ihe Lucid nwere. Anyị ga-enwe ikike pụrụ iche, gụnyere, na-enweghị mmachi, ikike ikike ọgụgụ isi, na na Nzaghachi, anyị ga-enwe ike ịnweta ojiji na ịgbasa nzaghachi maka ebumnuche ọ bụla, azụmahịa ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-enweghị nkwupute ma ọ bụ akwụghachi gị.
9. Mkpesa nwebisiinka
Anyị nwere amụma nke igbochi ịnweta ọrụ anyị yana ịkwụsị akaụntụ nke ndị ọrụ na-emebi ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ikwere na ihe ọ bụla na Ọrụ anyị na-emebi ikike nwebisiinka ị nwere ma ọ bụ ijikwa, ị nwere ike ịgwa ọkwa nke Lucid chepụtara dị ka ndị a: Biko lee 17 USC §512 (c) (3) maka ihe achọrọ maka ngosipụta ziri ezi. Ọzọkwa, biko mara na ọ bụrụ n'amaghị ama na-egosipụta na ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na Ọrụ anyị na-emebi, ị ga-akwụ ụgwọ na Lucid maka ụfọdụ akwụ ụgwọ yana mmebi.
10. Ibelata onwe onye
Ruo oke oke nke iwu dị mma kwere, ị ga-ewepụ ma ọ bụ jide Lucid na ndị ọrụ anyị, ndị isi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị mmekọ na ndị ọrụ (n'otu n'otu na ndị ọrụ) n'otu aka ma na-emegide mfu ọ bụla. , nkwupụta, ịchọrọ, mmebi, mmefu ma ọ bụ ụgwọ ("Nkwuba") na-ebili ma ọ bụ metụtara ya (a) nnweta ịbanye ma ọ bụ ojiji nke Ọrụ anyị; (b) ọdịnaya nke onye ọrụ gị ma ọ bụ nzaghachi; (c) imebi iwu ndị a; (d) imebi gị, mpụ gị ma ọ bụ ị mebie ikike ndị ọzọ (gụnyere ikike ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike nzuzo); ma ọ bụ (e) omume gị n'ihe metụtara Ọrụ anyị. Agree kwenyere na ị ga-eme ka a mara ọkwa nke ndị otu ọ bụla na-ekwu maka gị, na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ịgbachitere ụdị ebubo a wee kwụọ ụgwọ niile, mmefu na mmefu metụtara ịgbachitere ebubo ndị dị otú a (gụnyere, mana ọnweghị oke na ụgwọ ndị ọka iwu). You kwenyekwara na ndị otu ahụ ga-enwe ike ijikwa nchekwa ma ọ bụ ndozi nkwupụta nke ndị ọzọ. Ihe omume a bụ na mgbakwunye, ọ bụghịkwa ụgha, ihe ọ bụla ọzọ nke edepụtara na nkwekọrịta edere n'etiti gị na Lucid ma ọ bụ Ndị ọzọ.
Anyị anaghị ejikwa, anyị akwado ma ọ bụ buru ibu maka ọdịnaya Onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya nke ndị ọzọ dị na ọrụ anyị.
Ojiji ị na-eji Ọrụ anyị dị n'ihe ize ndụ gị. Enyere ọrụ anyị dị ka “dị ka ọ dị” na “dị ka ọ dị” na enweghị nkwado ọ bụla maka ya, na-egosipụta ma ọ bụ nke na-egosi, gụnyere, mana anaghị ejedebe na, akwụkwọ ikike echetara nke ahia, ike maka otu ebumnuche, aha na enweghị ịda iwu. Na mgbakwunye, Lucid anaghị anọchi anya ma ọ bụ nye ikike na Ọrụ anyị ziri ezi, zuru oke, ntụkwasị obi, nke dị ugbu a ma ọ bụ nke na-enweghị njehie. Ọ bụ ezie na Lucid na-anwa ime ka ịbanye na ojiji nke Ọrụ anyị dị mma, anyị enweghị ike ma ọ bụ na-anọchi anya ma ọ bụ nwee ikike na Ọrụ anyị ma ọ bụ sava anyị enwereghị nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Na-ewere ihe egwu niile maka ịdịmma na arụmọrụ nke Ọrụ a.
12. Ịkwụsị ụgwọ
Lucid na akụkụ ndị ọzọ agaghị adịrị gị ụgwọ n'okpuru iwu nkwekọrịta ọ bụla - ma dabere na nkwekọrịta, ntaramahụhụ, nleghara anya, iwu siri ike, akwụkwọ ikike, ma ọ bụ na ọ bụla — maka usoro ọ bụla na-apụtaghị ìhè, ihe na-esite na ya, na-esetịpụ, nke na-eme, na-ata ahụhụ ma ọ bụ na-emebi ma ọ bụ na-efu. uru dị na ya, ọ bụrụgodi na a gwara Lucid ma ọ bụ Ndị ọzọ metụtara ndụmọdụ nke ụdị mmebi a.
Oke ọrụ nke Lucid na Ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ, maka ebubo ọ bụla na-esite na ma ọ bụ metụtara Usoro ndị a ma ọ bụ Ọrụ anyị, n'agbanyeghị ụdị omume ahụ, ka amachaghị ego a kwụrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụla, site n'aka gị iji nweta ma ọ bụ jiri nke anyị. Ọrụ.
Etubere nkebi a agaghị egbochi ma ọ bụ wezuga ibu ọrụ n'ihi oke nleghara anya, wayo ma ọ bụ ụma nke omume nke Lucid ma ọ bụ Ndị ọzọ ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ nke na-enweghị ike ịpụpụ ma ọ bụ amachibido iwu na ọdabara. Agbakwunye, ikike ụfọdụ anaghị anabata iwepu ma ọ bụ mmachi nke ihe ọghọm na ihe ndapụta, yabụ oke ma ọ bụ iwepu ihe ahụ nwere ike anaghị emetụta gị.
Ruo oke oke nke iwu dị mma kwere, ịhapụ LucidPix na akụkụ ndị ọzọ nke LucidPix n'aka ọrụ, ụgwọ, nkwupụta, ihe ndị achọrọ, na / ma ọ bụ mmebi (ezigbo na nsonaazụ) nke ụdị na ụdị ọ bụla, amaara na amaghị. na, nkwupụta nke nleghara anya), ibilite ma ọ bụ metụtara esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ yana omume ma ọ bụ nleghara nke ndị ọzọ. You ga-ewepụghị ikike ị nwere ịnwe n'okpuru Usoro Okpomoku California § 1542 yana ụkpụrụ ọ bụla ma ọ bụ ụkpụrụ iwu zuru oke nke ga-amachi mkpuchi nke ịhapụ a gụnyere naanị nkwupụta ndị ị nwere ike ịmara ma ọ bụ chee na ọ dị gị mma na oge ikwenye na ntọhapụ a.
14. Data Nyefee na Nhazi data
Site na ịbanye ma ọ bụ iji Ọrụ anyị, ị kwenyere na nhazi, nyefee na nchekwa nke ozi gbasara gị na United States na obodo ndị ọzọ, ebe ị nwere ike ịnweghị ikike na nchebe dị ka ị nwere n'okpuru iwu mpaghara.
15. Kpebie esemokwu; Ijikwa esemokwu
Biko gụọ akụkụ nke a nke ọma n'ihi na ọ chọrọ ka ị dozie ụfọdụ esemokwu na nkwupụta na Lucid ma belata ụzọ ị ga - esi chọọ enyemaka anyị.
Ewezuga esemokwu pere mpe nke gị na Lucid na-achọ iweta ihe mmadụ mere n'obere ụlọ ikpe nkwupụta dị na mpaghara nke ụgwọ ịgba ụgwọ gị ma ọ bụ esemokwu gị nke Lucid na-achọ ntaramahụhụ ma ọ bụ enyemaka ọzọ kwesiri ekwesi maka ebubo enweghị ikike ọgụgụ isi nke akụ na ụba. gị na Lucid kwụsịrị ikike gị na ikpe mmebi iwu ma nwekwa esemokwu ọ bụla nke na-esite na ma ọ bụ metụtara Usoro ndị a ma ọ bụ Ọrụ anyị edozila n'ụlọ ikpe. Kama, esemokwu niile na-esite na ma ọ bụ metụtara Usoro ndị a ma ọ bụ Ọrụ anyị ga-edozi site na nkwekọrịta iwu nzuzo na-ejide na Santa Clara County, California dabere na Iwu Nkwupụta Strawrated na Usoro (Usoro Iwu). (“JAMS”), nke dị na weebụsaịtị JAMS ma tinye ya n'ọrụ. Either kwenyere ma kwenye na ịgụtala ma ghọta iwu nke JAMS ma ọ bụ wepụ ohere gị gụọ iwu nke JAMS na nkwupụta ọ bụla nke na iwu JAMS ezighi ezi ma ọ bụ na ha ekwesịghị itinye maka ebumnuche ọ bụla.
Gị na Lucid kwenyere na esemokwu ọ bụla nke na-esite na ma ọ bụ metụtara Usoro ndị a ma ọ bụ Ọrụ anyị bụ nke gị na Lucid nakwa na a ga-edozi esemokwu naanị site na mkpezi nke mmadụ na-agaghị ebute dị ka mkpezi klaasị, ime klas ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. ụdị nnọchite anya na-aga.
Gị na Lucid kwenyere na Usoro ndị a metụtara azụmahịa dị n'etiti etiti yana na mmejuputa iwu a nke Iwu 15 ga-abụ nke ukwu na usoro iwu nke Federal Arbitration Act, 9 USC § 1, et seq. (““ FAA ”), ruo oke oke nke iwu dị nyere ama. Dika FAA kpapuru, usoro ndi a na usoro iwu JAMS, onye ọka ikpe ga enwe ikike puru iche ime mkpebi niile na ihe doro anya banyere esemokwu obula ma nyekwa udiri uzo obula nke puru idi n’ụlọ ikpe; nyere, mana, na onye mkpezi ikpe ahụ enweghị ikike iji aka ya kpezie klas ma ọ bụ ihe nnọchite anya, ndị a machibidoro iwu a. Onye mkpezi okwu ahụ nwere ike ikpe naanị otu onye na enweghị ike ịkwado karịa ihe otu onye kwuru, na-elekọta ụdị klaasị ma ọ bụ onye nnọchi anya na-aga ma ọ bụ na-elekọta usoro ikpe ọ bụla metụtara ihe karịrị otu onye. Gị na Lucid kwenyere na maka mkpezi okwu ọ bụla ị malitere, ị ga-akwụ ụgwọ ịgba akwụkwọ ahụ na Lucid ga-akwụ ụgwọ na ụgwọ JAMS fọdụrụ. Maka mkpezi ikpe ọ bụla nke Lucid bidoro, Lucid ga-akwụ ụgwọ na ụgwọ JAMS niile. Gị na Lucid kwenyere na ụlọ ikpe steeti California na United States na-anọdụ na Santa Clara County, California nwere ikike pụrụ iche maka mkpesa ọ bụla na itinye aka na ntinye aka n'okwu ikpe.
Ọ BYR C LABLAR OR ORBARA ma ọ bụ metụtara ndị a, ma ọ bụ ọrụ anyị ga-abụrịrị n'etiti otu afọ na-esote nsogbu agbariri; Ma ọ bụghị ya, mkpesa ahụ bụ ọrụ zuru oke, nke pụtara na unu na LUCID agaghị enwe ikike inye aka na mkpesa.
I nwere ikike ịpụ na nkwekọrịta iwu metụtara n'ime ụbọchị 30 nke ụbọchị mbụ ị nabatara usoro nke Ngalaba nke 15 site na ịgwa Lucid ederede. A ga-ezigara ọkwa ahụ na:
Iji dị irè, mara nwepu aha ga-etinye aha gị zuru oke ma gosipụta nke ọma ebumnuche gị ịpụ na nkwekọrịta. Site na ịpụ na nkwekọrịta ọ bụla, ị na-ekwenye iji dozie esemokwu dị na ngalaba 16.
16. Iwu nchịkwa na Venue
Usoro ndị a yana ohere ị nwere na iji Ọrụ anyị ga-achịkwa ma rụọ ya ma tinye ya n'ọrụ na iwu California, na-enweghị mgbagide esemokwu iwu ma ọ bụ ụkpụrụ (ma ọ bụ nke California ma ọ bụ ikike ọ bụla ọzọ) nke ga-akpata ngwa ahụ. nke iwu ikike ọ bụla. Arụ ụka ọ bụla dị n'etiti ndị na-edozighi mkpezi ma ọ bụ enweghị ike ịnụ nkwu na obere okwu mkpesa ga-edozi n'ụlọ ikpe steeti ma ọ bụ nke etiti na California na United States, na-anọdụ na Santa Clara County, California.
17. Mgbanwe na usoro ndị a
Anyị nwere ike gbanwee mgbanwe na Usoro ndị a site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na anyị agbanwee mgbanwe, anyị ga-eziga Usoro mmezi ndị ahụ na Ọrụ anyị ma melite ụbọchị “emelitere ikpeazụ” dị n’elu. Anyị nwekwara ike ịnwa igosi gị site na izipu ozi email na adreesị metụtara akaụntụ gị, ma ọ bụrụ na ọ dị, ma ọ bụ nye ọkwa site na Ọrụ anyị. Belụsọ na anyị ekwughi otu a na ọkwa anyị, okwu ndị edozigharị ahụ ga-adị irè ozugbo yana ịgakwuru ohere ịbanye na ojiji nke Ọrụ anyị mgbe anyị nyechara ọkwa ga-egosi nnabata gị maka mgbanwe ndị ahụ. Ọ bụrụ na ikwenyeghi na Usoro mmegharị ahụ, ị ​​ga-akwụsị ịnweta na iji Ọrụ Anyị.
18. Nkwukọrịta electronic
Site na [imepụta akaụntụ LucidPix] [ịbanye ma ọ bụ iji Ọrụ ahụ], ị kwenye na ịnweta ozi nkwukọrịta sitere na Lucid (dịka ọmụmaatụ, site na email ma ọ bụ site na biputere nrịba ama na Ọrụ anyị). Nkwukọrịta ndị a nwere ike ịgụnye ọkwa banyere akaụntụ gị (dịka ọmụmaatụ, ikike ịkwụ ụgwọ, mgbanwe okwuntughe na ozi azụmahịa ndị ọzọ) yana akụkụ nke mmekọrịta gị na anyị. I kwenyere na ọkwa ọ bụla, nkwekọrịta, ekpughere ma ọ bụ nkwukọrịta ndị ọzọ anyị na-ezitere gị na elektrọnik afọ ga-emeju ihe nkwukọrịta iwu ọ bụla, gụnyere, mana enweghị njedebe na, na nkwukọrịta ndị dị otú ahụ ga-ede.
Anyị debere ikike, na-enweghị amamọkwa na naanị otu uche anyị, iji kwụsị ikike gị ịnweta ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị. Anyị anaghị elebara anya ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla metụtara na enweghị ike gị ịnweta ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ndenye ma ọ bụ akụkụ nke usoro nke Usoro ndị a bụ iwu na-akwadoghị, enweghị isi ma ọ bụ ghara ịgbagha, usoro ahụ ma ọ bụ akụkụ nke ihe a ga-eche na usoro ndị a agaghị emetụta ma ọfụma yana mmejuputa nke usoro ndị ọzọ.
21. Usoro ozo agbakwunyere na Ngwaọrụ iOS
Usoro ndị a metụtara ma ọ bụrụ na ị wụnye, nweta ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ na ngwaọrụ ọ bụla nwere sistemụ arụmọrụ iOS ("Ngwa") nke Apple Inc. ("Apple") mepụtara.
Ikwenye. You nabatara na emebiela usoro ndị a naanị n'etiti anyị, ọ bụghị na Apple, na Lucid, ọbụghị Apple, na-ekwu naanị maka ngwa na ọdịnaya ya. Further na-ekwenyekwu na iwu ojiji maka App ahụ na-adị n'okpuru mmachi ndị ọzọ edepụtara na Iwu Iwu Applelọ Ahịa Apple App dị ka ụbọchị nke nbudata App ahụ, na ihe omume ọ bụla, na iji Iwu ọ bụla. n'ime ụlọ ahịa ngwa ga-achịkwa ma ọ bụrụ na ha na-egbochi ndị ọzọ. Kwenyere ma kwenye na inwerela ohere iji lelee Iwu Iwu.
Mpempe akwụkwọ ikike. Ikike enyere gị naanị nwere obere ikikere a na-agaghị enyefe iji ngwa ahụ na iPhone ọ bụla, iPod aka ma ọ bụ iPad nke ịnwere ma ọ bụ jide ya dịka Iwu Iwu age debere na Usoro Ọrụ Storelọ Ahịa Apple App.
Mmezi na Nkwado Gị na Lucid kwenyere na Apple enweghị ọrụ ọ bụla iji nye mmezi yana ọrụ nkwado ọ bụla gbasara ngwa.
Akwụkwọ ikike. You kwenyere na Apple abụghị ihe ọ bụla maka akwụkwọ ikike ọ bụla, na akọwara ma ọ bụ na-egosi site na ngwa. N'ihe banyere ọdịda ọ bụla nke App ahụ ịgbadoro ikikere ọ bụla, ị nwere ike ịgwa Apple, Apple ga-akwụghachi ọnụahịa azụmaahịa ahụ, ọ bụrụ na ị ga-akwụ Apple maka ngwa ahụ; yana ruo na oke nyere ikike dị ka iwu dị, Apple agaghị enwe ikike ikike ọzọ ọ bụla dabere na ngwa ahụ. Ndi otu a kwenyere na ruo mgbe enwere ikike ndenye aha ọ bụla, ebubo ọ bụla, mfu, ụgwọ ọrụ, mmebi, ụgwọ ma ọ bụ mmefu nke ọ bụla mebiri na akwụkwọ ikike ọ bụla enwere na nke Lucid. Agbanyeghị, ị ghọtara ma kwenye na dị ka Usoro ndị a si dị, Lucid akagbuola ikike niile nke ụdị ọ bụla dabere na ngwa ahụ, yabụ na enweghị akwụkwọ ikike etinyere App a.
Nkwupụta Ngwaahịa. Gị na Lucid kwenyere na dị ka n’agbata Apple na Lucid, Lucid, ọ bụghị Apple, ka ọ dịịrị maka ịza ajụjụ ọ bụla metụtara ngwa ma ọ bụ ihe gị na / ma ọ bụ iji ngwa ahụ, gụnyere, mana anaghị ejedebe na (a) ebubo ngwaahịa ngwaahịa, (b) nkwupụta ọ bụla na Ngwa ahụ anaghị eme ihe ọ bụla iwu chọrọ ma ọ bụ usoro iwu chọrọ, yana (c) ebubo na-ebilite n'okpuru nchebe ndị ahịa ma ọ bụ iwu yiri ya.
Ikike Nkike nke ikike. Ndị otu a kwenyere na, n'ihe omume nke atọ na-ekwu na ngwa ma ọ bụ ihe gị na iji ngwa ahụ na-emebi ikike ikike ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, Lucid, ọ bụghị Apple, ga-enwe naanị maka nyocha, agbachitere, ndozi na mwepu. nke ngabiga ụdị amamịghe a na-ekwu maka oke chọrọ n'okpuru Usoro ndị a.
Nrube isi nke iwu. You na-anọchite anya ma nyekwa ikike na (a) ị nọghị na obodo a na-etinye iwu gọọmentị US, ma ọ bụ nke gọọmentị US họpụtara dị ka “ndị na-akwado ọha na eze na-akwado”, na (b) edeghị aha gị ndepụta gọọmentị US ọ bụla amachibidoro ma ọ bụ amachibidoro iwu.
Aha Mmepụta na Adresị. A ga-agwa ajụjụ ọ bụla, mkpesa ma ọ bụ nkwupụta gbasara ngwa ahụ:
Usoro nkwekọrịta nke atọ. I kwenyere na isoro usoro nke ato ndi ozo di ire mgbe ijiri Oru.
Onye nke ato. Ndị otu ndị ahụ kwenyere ma kwenye na Apple, na ndị enyemaka enyemaka Apple, bụ ndị ọzọ na-erite uru nke Usoro ndị a, yana, na ịnakwere Usoro ndị a, Apple ga-enwe ikike (a ga-ewere ya na ọ nabatara ikike) imeju ndị a. Okwu megide gị dị ka onye nke atọ na-erite uru na ya).
22. N’ime ịzụ ahịa
A ga-etinye ndenye "Memo LucidPix Monthly LucidPix" na onye otu LucidPix kwa afọ "na nkwenye gị (na njedebe ikpe ma ọ bụ intro) na nkwenye. Ndenye aha ga - emeghari na akpaghị aka ma ọ bụrụ na akagbuola ya n'ime awa iri abụọ na anọ tupu njedebe nke oge a. You nwere ike ịkagbu oge ọbụla site na iji ntọala akaụntụ iTunes gị. A ga-ahapụ akụkụ ọ bụla ejibeghi ya na nnwale n'efu ọ bụrụ na ịzụta ndenye aha
23. Ihe dịgasị iche
Usoro ndị a mejupụtara nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na Lucid metụtara nnweta gị na ojiji nke Ọrụ anyị. Ọdịda nke Lucid iji gosi ma ọ bụ mmanye ikike ọ bụla ma ọ bụ ndokwa nke Usoro ndị a agaghị arụ ọrụ dị ka iwepụ ikike ma ọ bụ ndokwa dị otú ahụ. Aha ngalaba dị na Usoro ndị a bụ maka ịdị mma naanị na enweghị nsogbu ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla. Ewezuga otu enyere na nke a, Edebere iwu ndị a naanị maka abamuru nke ndị ọzọ, ebughịkwa enye onye ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ikike ndị ọzọ.